Yu Huan Machinery Co., Ltd. ndiye akazotsiviwa pamusoro Ningbo Shuangyu (Samewe) nekombiyuta Flat Knitting Machine Manufacturer Co., Ltd., makasimbiswa muna 1990,
Chinhu misoro michina kugadzira zvebhizimisi kusanganisa R & D, kugadzira, rokutengesa uye basa. Sezvo nheyo muna 1992, tave kushanda pamwe mudzimba mafekitari kutungamirira uye nhaka yakagozha kugadzirwa equipments uye simba kwesayenzi kugona
In mangwanani 2006, boka akatamira kugadzira napamaruva Ningbo China kwenguva makuru kukura nzvimbo nechido kutsunga uye akatanga kubudisa nekombiyuta Flat Knitting Machines muna 2007. kambani ndokwenguva nzvimbo 28000 ㎡, chivako nzvimbo iri 25000 ㎡ . Parizvino, kune vanopfuura 500 vashandi, kusanganisira hwokugadzira vashandi chakaita kuti anopfuura 40%.
In Mumakore 28 apfuura , Shuang Yu agara vakanamatira vanhu vaifarira basa uzivi: innovating uye kukura kumusika, vanobatisisa unhu unyanzvi, uye vachidikanwa vatengi Basa. Tinogara anotungamirirwa uye kukurudzirwa utsanzi, uye paakapiwa zvizere vashandi mukurovedza uye kwesayenzi kutsvakurudza uye kukura, uye vakawana zhinji National rwokugadzira patents.
Zvino, Shuang Yu ane Satellite mahofisi kuIndia, Turkey, Vietnam uye dzimwe nyika, zvinhu zvedu zvave aivigirwa kuti mhiri kwamakungwa richizivikanwa uye yaakakudza pamusika womumusha.
"Rambai kuenda, usakanganwa pfungwa dzako kutanga". Mune ramangwana kukura, Shuang Yu acharamba kuomerera kumugwagwa "High zvigadzirwa, yepamusoro uye yakakwirira kutendeseka", ne simba ano, chakanakisisa midziyo uye akakwana utariri, isu ichapa zvinhu nani uye zvakaitika pabasa makasitoma edu.
Innovation hakumboperi, ramangwana risingaperi. Shuang Yu ari kutarisira mberi ruoko-mu-ruoko newe kubwinya namazano!